Ma Flounder Waa Kalluun Biyo Qabow - Baaskiil Baaskiil
Bogga ugu weyn » Kaladuwan » Ma Flounder Waa Kalluun Biyo Qabow
Dabayluhu ma biyo qabow baa?
Waa maxay kalluunka biyaha qabow ee ugu fiican in la cuno?
Maxaa loo tixgeliyaa kalluunka biyaha qabow?
Kalluun noocee ah ayaa ah flounder?
Heerkulkee buu jecel yahay?
Ma u boodboodaa sida cimilada qabow?
Dabayluhu ma kalluun wanaagsan oo la cuno?
Maxay yihiin afarta kalluun ee aan marnaba la cunin?
Waa maxay faraqa u dhexeeya kalluunka biyaha qabow iyo kalluunka biyaha diiran?
Kalluunkee ayaa ku noolaan kara biyo diirran?
Waa maxay kalluunka biyaha diirran?
Waa maxay kalluunka ugu nadiifsan?
Dabayluhu ma halibut baa?
Kee baa ka wanaagsan cod ama boodh?
Waa maxay faraqa u dhexeeya keliga iyo dhogorta?
Halkee bay talaa jiilaalka?
Aaway meesha ugu fiican ee lagu qabto flounder?
Halkee buu ka lulaa
Kalluumeysiga qulqulka miyuu wanaagsan yahay jiilaalka?
Ma kaluumaysan kartaa xilliga jiilaalka?
Waa maxay faraqa u dhexeeya xagaa iyo jiilaalka duufaanta?
Dabaylku ma jilicsan yahay?
Ma caadi baa in maalin kasta la cuno flounder?
Waa maxay faa'iidooyinka flounder?
Qaar ka mid ah kalluumeysatada xeebta bari ayaa ku dhiirranaya dabaylaha dabayllaha ah ee Maarso si ay u raadiyaan duufaannada jiilaalka, noocyada biyaha qabow kuwaas oo muuqaalkooda galbeedka Long Island Sound ay inta badan ka dhacaan meel u dhow Maalinta St. Patrick.
Roobabka jiilaalku waa kalluunka biyaha qabow ee ugu sarreeya. Dhab ahaantii, ma aha oo kaliya inay ku koraan biyo qabow, kalluunkani xitaa wuxuu ku dhashaa biyo qabow, marka biyuhu ay caadi ahaan qabow yihiin xilliga jiilaalka iyo guga, horraantii December ee North Carolina iyo dabayaaqadii June ee Gacanka St.
Kalluunka ku nool mugdiga, biyaha qabow waxaa ku jira heerar sare oo Omega 3 ah. Salmon, sardines, tufaax qaanso roobaad, anchovies, bass, herring, iyo tuna waa ilo qani ah oo laga helo omega 3 fatty acids.
Kalluunka biyaha qabow waxaa ka mid ah salmon, tuna, mackerel, herring, trout, anchovies iyo noocyo kale. King mackerel, tilefish, swordfish, tuna bigeye iyo shark ayaa ah kuwa ugu sarreeya meerkuriga, FDA ayaa ka digtay.
Flounders waa koox ka mid ah noocyada kalluunka fidsan. Waa kalluunka demersal, oo laga helo gunta hoose ee badaha adduunka; noocyada qaarkood ayaa sidoo kale geli doona estuaries.
Heerkulka biyaha ugu fiican ee lagu qabto dhammaan noocyada duufaantu guud ahaan waa inta u dhaxaysa 55-68ºF, in kasta oo ay jiraan faraqyo la xusay oo ku saabsan doorbidida heerkulka biyaha ee u dhexeeya qulqulka Atlantic, Pacific, iyo biyaha koonfureed ee Maraykanka.
Kalluunka dhogorta leh, kalluunka cas iyo flounder - noocyada aasaasiga ah ee xeebaha - sida cimilada qabow. Si kastaba ha ahaatee, marka cimiladu noqoto mid aad u qabow, aagagga shaqo joojinta kalluunkan ayaa yaraada.
Xaqiiqooyinka Nafaqada iyo Faa'iidooyinka Caafimaadka. Waxaa laga helaa gunta hoose ee badaha iyo badda, Baasifiga Flounder waa kalluun aad u fiican in la cuno casho maadaama ay bixiso dhadhan cajiib ah oo caafimaad qabta.
Samaynta liiska "ha cunin" waa King Mackerel, Shark, Swordfish iyo Tilefish. Dhammaan talooyinka kalluunka sababtoo ah heerarka meerkuriga oo kordhay waa in si dhab ah loo qaato. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka nugul sida carruurta yaryar, haweenka uurka leh ama naaska nuujinaya, iyo dadka waaweyn.
Kalluun biyo diirran ayaa laga helaa wabiyada, togagga, harooyinka iyo badda. Kalluunka biyaha qabow waxaa inta badan laga helaa badaha. Kalluunka biyaha qabow waxaa sidoo kale laga helaa harooyinka iyo webiyada laakiin inta badan waxaa laga helaa jawi aad u qabow oo aan laga helin biyaha gacmeed sida marar badan kalluunka biyaha diiran.
Kalluunka ku barbaara xaaladaha biyaha diiran ayaa ah kuwa sida caadiga ah maskaxda ku haya inta badan milkiilayaasha balliyada. Kuwani waxay noqon karaan Bass Largemouth, Catfish, Bluegills ama Sunfish, iyo Crappies. Kalluunkani caadi ahaan waa adag yahay inta badan Maraykanka waxayna ku noolaan karaan jiilaalka waqooyiga.
Oregon, "kalluunka biyaha diirran" waxaa loola jeedaa baska weyn iyo afka yar, kalluunka qoraxda, crappie, catfish channel, bullheads, perch jaalaha ah, walleye iyo bass hybrid. Midna (marka laga reebo suurtogalnimada Sacramento perch) ayaa u dhashay Oregon, laakiin badi waxay joogeen ilaa dabayaaqadii qarnigii 19-aad ama horraantii qarnigii 20-aad.
5 ka mid ah kalluunka ugu caafimaadka badan in la cuno Duur-joogta Alaskan Salmon (ay ku jirto qasacadaysan) Sardines, Pacific (duur-qabta) Trout qaansoroobaad (iyo qaar ka mid ah noocyada harada) Herring. Tuunada Bluefin Orange Roughy. Salmon (Atlantic, oo lagu beero qalimaan) Mahi-Mahi (Costa Rica, Guatemala & Peru).
Yaab sida ay u dhawaaqdo, Halibut waa Flounder. Flounder waa magaca guud ee qoyska Flatfish oo dhan, oo ay ku jiraan Turbot, Sole, Plaice, iyo qaar kaloo badan. Halibut waa qayb ka mid ah qoyskaas.
Flounder waxa uu leeyahay muuqaal aad u jilicsan iyo khafiif ah, dhadhan flounder ah oo yar. Sababtoo ah qaab-dhismeedkeeda jilicsan, xayndaabyada qulqulka ayaa xoogaa dhib badan si loo kariyo bilawga. Codka dhogorta leh wuxuu qaataa faa'iido yar sababtoo ah way fududahay in la barto sida loo kariyo dhogorta kalluunka
Erayga “keli” waxa si gaar ah loola jeedaa kalluunka qoyska Soleidae sida ay u kala horreeyaan Pleuronectiformes. Waxay ka dhigan tahay 30 genera iyo 130 qoys oo kalluunka ah. Erayga "flounder" waxa loola jeedaa kalluunka qoysaska Achiropsettidae, Pleuronectidae, Paralichthyidae iyo Bothidae.
Dabaylaha jiilaalku waxay ka guuraan aagagga xeebaha waxayna u guuraan biyaha xeebaha u dhow xilliga jiilaalka, taas oo ah meesha ay ka helaan magacooda.
Sidaan soo sheegnay, doomaha, meelaha dhogorta leh, dhagxaanta iyo tuulannada ayaa dhammaan ah meelaha muhiimka ah ee ay dabaylaha (fluke) jecel yihiin inay dhigaan oo ay gaadmada ugaadhsadaan. Waxay hayn karaan kalluun badan waxayna ka badbaadin karaan ugaarta sida dolphins, shark, iyo kalluunka waaweyn.
Xagee ku nool yihiin? Flounder waa kalluunka biyaha cusbada ah ee sida caadiga ah u soo laadla meel u dhow xeebta, oo ku teedsan dhinaca badda bari, iyo sidoo kale hareeraha, dooxooyinka, iyo webiyada. Xilliga jiilaalka, waxay u haajiraan badda oo caadi ahaan dib uguma noqdaan biyaha gacmeed ilaa xilliga gu'ga.
Kalluumeysiga duufaannada jiilaalka waxay noqon karaan kuwo waxtar leh sida gu'ga iyo bilaha xagaaga ilaa inta waqtigaaga iyo goobtaadu ay sax tahay. Jiilaalku waa xilli roobaadka dabaylaha wataa, waxaana laga yaabaa inaad u baahato inaad aado xeebta si aad u qabato inta lagu jiro wakhtigan. Kalluumeysiga duufaannada jiilaalka badanaa waxay kaaga baahan yihiin in aad hoos u dhigto.
Haa, waxaad qaban kartaa qulqulka bilaha jiilaalka laakiin waa inaad bartilmaameed ka dhigtaa meel ka baxsan xeebta ama agagaarka dhismaha xeebta. Dabayluhu waxay u guuraan Gacanka Mexico iyo Badweynta Atlaantigga xilliga qaboobaha si ay u dhalaan si aad u baxdo 30 ama 40 mayl si aad u hesho iyaga inta lagu jiro bilaha qaboojiyaha.
Fudud: Dabaylaha Jiilaalku way ka madow yihiin Flounder xagaaga. Waxay u ekaan karaan ku dhawaad ​​madow - sidaa darteed naanaystooda, "Blackback". Flounder xagaaga waa bunni khafiif ah oo leh kareem ama baro cadcad. Flounders waxay awoodaan inay beddelaan midabka si ay u waafajiyaan agagaarkooda, inkastoo, wejigoodu waa habka ugu macquulsan ee lagu kala saari karo.
Dufanka Flounder waa mid khafiif ah oo jilicsan, dhadhankooduna waa mid khafiif ah, oo leh dhadhan yar oo macaan, taas oo sahlaysa in loo isticmaalo noocyo kala duwan. Waxa ugu caansan in la dubo, shiilo, la shiilo, iyo shiilan.
Flounder/keli - hal mar todobaadkii ugu badnaan.
Markaad cuntid hilibka doofaarka, waxaad heleysaa tiro nafaqo oo qiimo leh iyo faa'iidooyin caafimaad. Marka hore, waa kalluunka dufanku ku yar yahay, kaloriin yar, kaas oo si fiican ugu shaqeeya isha borotiinka ee dadka isku dayaya in ay miisaanka dhimaan. Waxay sidoo kale ku siinayaan sahay wanaagsan oo fiitamiinada B, fosfooraska, iyo magnesium.
Waa maxay Kalluunka Biyaha Qabow
Waa maxay Kalluunka Biyaha Qabow ee Wanaagsan
Waa Maxay Kalluunka Biyaha Qabow Ee La Cuno
Jawaab Degdeg ah: Waa maxay Kalluunka Biyaha Qabow ee aan heli karo
Jawaab degdeg ah: Waa maxay Kalluunka Biyaha Qabow ay wada noolaan karaan
Maxaa Kalluunku Ku Noolaan Karaa Biyaha Qabow
Ma Anchovies Kalluun Biyo Qabow
Jawaab degdeg ah: Axolorls ma kalluun biyo qabow
Ma Cichlids Kalluun Biyo Qabow
Su'aal: Rahyo ma Kalluun Biyo Qabow ah
Jawaab Degdeg ah: Ma Neons-ka Kalluunka Biyaha Qabow
Jawaab Degdeg ah: Ma Oscars Kalluun Biyo Qabow
Previous Post: Su'aal: Sidee bay u diiran yihiin Biyaha Kalluunka Betta si ay u noqdaan